Kuthetha ntoni ukuphupha ngeTsunami? Ukufumana kwi-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
1 Iyintoni intsingiselo yokuphupha i-Tsunam?
2 Ukuphupha ngeTsunami kubonisa ntoni?
3 Intsingiselo yokuphupha ukuba itsunami isondele
4 Intsingiselo yokuphupha ulixhoba letsunami enkulu
5 Intsingiselo yokuphupha ngeTsunami emini
6 Intsingiselo yokuphupha iTsunami ebusuku
7 Intsingiselo yokuphupha i-tsunami enkulu
8 Kuthetha ukuthini ukuphupha ndisinda kwitsunami?
9 Intsingiselo yokuphupha ngamanzi acocekileyo iTsunami
10 Ukuphupha ngetsunami yodaka
Iyintoni intsingiselo yokuphupha i-Tsunam?
Utshintsho olungcono luhlala lwamkelekile kwaye ukuphupha itsunami luphawu lokuba oku kuyakwenzeka. Kuya kuba lixesha lokuba yonke into ibaluleke kwaye ngaphezulu kwako konke ukuvumela izinto ukuba zihlale zilungile. Kuya kufuneka ulumke ukuba yonke le micimbi ayizi ungakhange ulinde.
Eli phupha liyinxalenye yokuphupha isiphelo sehlabathi esinokuba sihle okanye sibi, kuba yonke into iya kuhlala ixhomekeke kutoliko lwakho. Abanye abantu baya kuba yinto entle kakhulu kwaye kwabanye imeko embi kakhulu, kuba injalo. Inyani yile yokuba emva kwesi sithuba kuya kubakho ukwazi ngokuthe ngqo ukuba eli phupha liya kuthetha ntoni kuni nonke.
Ukuphupha ngeTsunami kubonisa ntoni?
Oku kuyakuxhomekeka kwizinto ezininzi kwaye ngakumbi kwisantya sokuqiqa onazo kuzo zonke izinto. Ukuphupha iliza elitshabalalisayo kunokubonisa utshintsho ukuze uphume kwindawo yakho yokuthuthuzela. Kuya kufuneka unikele ingqalelo kuwo onke la manqaku ukuze imeko itshintshe ngokukhawuleza.
Esi sithuba siza kukubonisa awona manqaku anomdla wokuqonda ukuba eli phupha sisilumkiso. Ukutolikwa kuya kuxhomekeka kuwe kuphela kwaye eyona nto ibalulekileyo iya kuba kukuqonda ukuba yintoni ekufuneka iguqulwe ibe ngcono. Kufuneka ulumke ungaphelelwa lithemba, kuba yonke into inokuphuculwa kwaye ixhomekeke kuwe kuphela.
Intsingiselo yokuphupha ukuba itsunami isondele
Yonke into ebomini inomzuzwana kwaye lifikile ixesha lokuzisebenzisa ezo mvakalelo. Lixesha lokuzama ukuthetha naba bantu kwaye uvakalise uluvo lwakho, kodwa kunye neklasi. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukusoloko uwalumkele amagama akho, kuba kufanelekile ukuba uthethe ngembeko naye wonke umntu.
Intsingiselo yokuphupha ulixhoba letsunami enkulu
Akukho xesha apho ubomi bakho bemali buza kuwa, kodwa buluncedo kwaye buxhomekeke kuwe. Into ephambili kukuzama ukuqonda ukugqithisa okanye i-bottleneck kunye nokulandelelana kokuyicombulula. Yonke le micimbi kufuneka ijongane nokuqiniseka ukuba nantoni na enokwenzeka kwaye ingoyiswa nguwe.
Ukuphupha ngetsunami apho ulixhoba khona yinto enomdla, kuba iyakuvumela ukuba ucwangcise. Zama ukutshintsha indlela obukhokele ngayo ubomi bakho bezemali, kuba isitshixo siya kubakho.
Intsingiselo yokuphupha ngeTsunami emini
Olu lusuku olukhulu kwaye lubonisa ukuba uya kufumana utshintsho oluqinisekileyo kuzo zonke iimvakalelo zakho. Lixesha lokuba wenze umahluko ngendlela elungileyo, kuba ixesha lakho sele lifikile. Eli phupha licela kuphela ukuba ulumke kakhulu ukuba ungahanjiswa sisigaba esihle esiza kuza.
Intsingiselo yokuphupha iTsunami ebusuku
Ilizwi elibi malunga notshintsho, kuba ibonisa ukuba into embi inokuza kwaye ayilunganga. Ukuphupha nge-tsunami ebusuku kubonisa isidingo sokulungiselela into enokubutshintsha ubomi bakho bube mandundu. Yonke into iyinqanaba kwaye uninzi lwezinto ziyenzeka, ke sukuphelelwa lithemba kwaye usebenze nzima ukufikelela kuko konke.
Intsingiselo yokuphupha i-tsunami enkulu
Bona ukwakheka kwenye apho isigebenga (tsunami) sisoyikisa, zama ukuhlala ulumkile kwaye uzama ukunqanda ezinye iingxaki ezizayo. Utshintsho luya kuba lukhulu kwaye iya kuba lixesha lokulungiselela ukujongana nazo ngokugqibeleleyo. Into ephambili kukuba uqaphele kuzo zonke ezi ndawo, oko kukuthi, ukulungele ukulwa nayo yonke le nto.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ndisinda kwitsunami?
Inqanaba elinzima liphelile kwaye unethuba lokonwabela lo mzuzu wolonwabo olukhulu. Kufuneka uqaphele kuba umlo olungileyo uhlala ekulungele ukulwa. Into ebaluleke kakhulu kukuqonda ukuba ixesha lakho lifikile kwaye ukusukela ngoku kuya kuxhomekeka kuwe kuphela ukuze yonke into iqhubeke ngoluhlobo.
Intsingiselo yokuphupha ngamanzi acocekileyo iTsunami
Eli phupha libonisa into enomdla kakhulu ngobomi bakho bexesha elizayo, oko kukuthi, kuya kwenzeka ntoni emva koko. Ukuphupha ngetsunami yamanzi acocekileyo kubonisa ukuba olu tshintsho lufuna ukucoca ukucinga kwakho. Soloko kufuneka uzilungiselele, kuba xa utshintshela kokungcono inyani kukuba yonke into iya kuhlala ilungile.
Ukuphupha ngetsunami yodaka
Abantu abaninzi bafuna ukukulimaza kwaye eli phupha limele inkathalo ekufuneka ithathelwe kuye. Zama ukungazingcolisi kwaye ukuba kukho imfuneko, hlala kude kubo bonke abantu abafuna ukukulimaza. Kungcono ukuba njalo kunokuba ujongane nezi ngxaki zihlala zisonisa ekoyiseni.
Ngaba kubi ukuphupha ngeTsunami?
Ngokuqinisekileyo, kwaye ngaphezu kwako konke, sisilumkiso sento eyakuthatha ukoyisa iingxaki. Uninzi lwazo luyinxalenye yobomi kwaye ukubaleka akunakuze kube yinto enokuqwalaselwa, kuba ukujongana nazo kungcono. Into ephambili kukuba uqonde ukuba izigaba zotshintsho kunye neengxaki ziyahlaziywa, into engasoze itshintshe yintando yokoyisa ubunzima.